Wufuud kala duwan ayaa ku qulqulaysa magaalada Garowe halkaasi oo lagu wado inuu ka… – Hagaag.com
Wufuud kala duwan ayaa ku qulqulaysa magaalada Garowe halkaasi oo lagu wado inuu ka…
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa mgaalada Garoowe kusoo dhoweeyay Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka qeyb galaya shir weyn oo hay’adda Heritage ku qabanayso magaalada todobaadkan.
Waxaa horey magaalada Garowe u tagay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, guddoomiyayaasha labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanno.
Ammaanka magaalada Garowe ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo ciidamo iyo gaadiidka dagaalka lagusoo daadiyay guud ahaan waddooyinka magaalada, waxaana socda baaritaan culus oo lagu sameynayo baabuurta.
Madaxweynaha DG Puntalnd Siciid Deni ayaa sheegay in ay masuuliyad dheeraad ah iska saarayaan sugida amniga Garowe oo uu sheegay in loo gartay in ay marti galiso shir markii ugu horaysay Soomaaliya lagu qabanayo.
Laamaha amniga Puntland ayaa la faray in ay ka hortagaan cid kasta oo isku dayda in ay ku kacdo falal lid ku ah ammaanka iyo kala dambaynta.